Hay’adaha Ammaanka oo laga dhex raadinayo Qofkii noqon lahaa Duqa Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Taliska Booliska Soomaaliya oo war ka soo saaray weerarkii Hotel SYL
Hay’adaha Ammaanka oo laga dhex raadinayo Qofkii noqon lahaa Duqa Muqdisho.
By HornAfrik	 On Aug 11, 2019
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii lagu dilay Qarax Ismaadaamin Duqii, ahaana Gudoomiyihii Gobalka Banaadir, C/raxmaaan Omar Osmaan Eng Yariisow waxaa socda Olole ballaaran oo loogu jiro qofkii noqon lahaa Duqa Muqdisho, taasoo ay ku hardamayaan Beelaha uu Xilkan ka dhaxeeyo.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka Somalia, Maxamad C/laahi Farmaajo ayaa hadda ka dhex raadinaya qofkii noqon lahaa Duqa Muqdisho Hay’adaha Ammaanka, Waxayna Madaxda Qaranku doonayaan inuu booskaasi buuxiyo qof leh Khibrad Ciidan oo la imaan kara Qorshe iyo Istaraatiijiyad uu ku xasilin karo Caasimadda ay ragaadiyeen Weeraradda Argagixisanimo.
Madaxda Qaranka ayaa loo gudbiyay Saraakiil dhowr ah, kuwaasoo ay hadda ku jiraan kala xulashaddii u dambaysay, Waxaana ugu Cad cad Gaashaanle Dhexe Aadan Maxamad Cumar oo soo qabtay Xilal kala duwan oo amni iyo Maamul, iyo Col Xasan Cali Nuur Shuute oo hadda ah Gudoomiyaha Maxkamadda Darajadda 1aad ee Ciidanka Qalabka sidda ee Somalia, Isla markaana Muddo dheer ka soo shaqaynayay Howlaha Garsoorka, Xilal kala duwana ka soo qabtay.
Gaashaanle Aadan Nisa
Gaashaanle Dhexe Aadan Maxamad Cumar waxa uu isna soo nqoday Gudoomiye Degmo, Taliye Qaybeed NISA ah, TaliyeXigeen Howlgallo, Taliyaha Howlgaladda NISA, iyo Xilal kala duwan oo Amni, Waxaana uu ka mid yahay Saraakiisha leh Khibradda Amni ee la imaan kara Istaraatiijiyad lagu xasilin karo Caasimadda, loogana adkaan karo Argagixisadda.
Labadan Saraakiil ayaa qayb ka ah Magacyo dhowr ah oo loo gudbiyay Madaxwaynaha, kuwaasoo hadda kala xulitaan ku jira. Waxaana la aaminsan yahay haddii midkood xilkan ku guulaysto inay la imaan karaan Istaraatiijiyad ay kaga adkaadaan Argagixisadda oo hadda weerarkoodii ugu dambeeyay ku qarxiyay Xafiiska Duqii Muqdisho ee geeriyooday.
Isku day uu xabsiga uga baxsan rabay madaxweyne CABDI ILEY oo fashilmay
Sawirro: Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland oo la dhaariyay iyo ninka ugu da’da weyn…